Naghachi faịlụ 2GB PST.
Home ngwaahịa DataNumen Outlook Repair Naghachi faịlụ 2GB PST
DataNumen Outlook Repair - Naghachi faịlụ 2GB PST
iji DataNumen Outlook Repair iji weghachite faịlụ 2GB PST gị buru ibu, site na:
Tugharia ya n'ime uzo Outlook 2003 ohuru.
Kewaa ya n'ime ọtụtụ obere faịlụ
Microsoft Outlook 2002 na ụdị ndị dị ala na-egbochi oke PST faịlụ na 2GB. Mgbe ọ bụla nha faịlụ PST ruru ma ọ bụ karịa na njedebe ahụ, ị ​​gaghị enwe ike ịnweta ya, ma ọ bụ ịnweghị ike itinye data ọhụrụ ọ bụla na ya. Nke a ka a na-akpọ oversized PST faịlụ nsogbu.
Microsoft enweghị ụzọ na-eju afọ iji dozie nsogbu a. Ihe kachasị mma bụ ngwaahịa anyị DataNumen Outlook Repair, nke nwere ike weghachite faịlụ PST buru ibu n'ụzọ dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma. Iji mee nke a, e nwere ụzọ abụọ ọzọ:
Ọ bụrụ na ị nwere Outlook 2003 ma ọ bụ ụdị dị elu arụnyere, ị nwere ike gbanwee faịlụ PST buru ibu n'ime usoro Outlook 2003 ọhụrụ, nke na-enweghị oke oke 2GB. Nke a bụ usoro kachasị mma.
Ọ bụrụ na ịnweghị Outlook 2003 ma ọ bụ ụdị dị elu karịa, ị nwere ike kewaa oversized PST faịlụ n'ime ọtụtụ obere faịlụ. Faịlụ ọ bụla nwere akụkụ nke data na faịlụ PST mbụ, mana ọ bụ ihe na-erughị 2GB ka ị nwee ike ịnweta ya na Outlook 2002 ma ọ bụ nsụgharị dị ala na-enweghị nsogbu ọ bụla. Usoro a dị obere ahụ erughị ala ka ịchọrọ ijikwa ọtụtụ faịlụ PST mgbe usoro nkewachara.
Ihe omuma zuru oke banyere nsogbu faili PST buru ibu.
Naghachi faịlụ 2GB PST